Sary:Milkau Oberer Teil der Stele mit dem Text von Hammurapis Gesetzescode 369-2.png, F0182 Louvre Code Hammourabi Bas-relief Sb8 rwk.jpg
I Hamoraby dia mpanjaka fahenina tao Babilôna, niaina tany amin’ ny taonjato faha-18 tal. J.K. izay nanapaka tamin' ny taona 1792 tal. J.K. hatramin' ny taona 1750 tal. J.K. Teraka tamin' ny taona 1810 izy ary maty tamin' ny taona 1750 tal. J.K. Nandimby an' i Sinmolbalita (Sin-muballit) rainy izay niala tamin' ny fitondrana noho ny tsy fahasalamany izy. Nanao fanafihana maro dia maro izy ka afaka nanitatra ny fanapahany mankany Babilôna sy Mesôpôtamia, ary namarana ny fakana tany any Somera sy Akady. Isan'ny mpankana ela fanapahana indrindra tao Atsinanana Akaiky izy ary isan' ny nanam-boninahitra indrindra noho ny halehiben' ny asa vitany na amin' ny pôlitika na amin' ny fanaovan-dalàna. Mampalaza azy ny nanoratany ny Fehezan-dalànanampitondrain' ny mpahay tantara ny anarany, izay rijantenin-dalàna tranainy indrindra hita indray. I Hamoraby dia mpanjaka amôrita fahenina tao Babilôna izay azo lazaina fa tena mpanorina ny fianakavia-mpanjaka (dinastia) voalohany.
Ny anarana nogasina hoe Hamoraby dia avy amin' ny teny amôrita sy akadiana hoe ʻAmmurāpi, izay midika hoe "mpanasitrana ny razambe", izay avy amin' ny teny hoe ʻAmmu, "havana amin-dray" sy Rāpi, "mpanasitrana".
Nahay nampifanindran-dalana ny fahaizana mifampiraharaha sy ny fahaiza-mitari-tafika i Hamoraby ka nanitatra hatranihatrany ilay fanjakana natsangany, dia izay tsy nihoatra ny tanànan’ i Babilôna tamin’ ny voalohany. Resiny daholo ireo mpanjakan’ ny tanàna toa an’ i Larsà, i Elama, i Mary ary i Esnona, ary nampanompoiny koa ny fanjakan’ i Asiria. Tamin’ ny taona 1760 tal. J.K. dia tonga mpanjakan’ ny fanjakana miray izay nivelatra hatrany amin’ ny helodrano Persika ka hatrany amin’ ireo lohasahan’ i Tigrisy (na Tigra) sy hatrany Eofrata any avaratra ka hatrany amin’ ny morontsirak’ i Mediteranea any andrefana.
Rehefa tafarain’ i Hamoraby tamin’ ny alalan’ ny fitondram-panjakana tao Babilôna ireo tany azony tamin’ ny fanafihana ara-tafika dia nanokana ny ezaka nataony mba hiarovana ny sisin-tany izy say sady nanao izay hanomezana vahana ny fandrosoan’ ny ao amin’ ny fanjakany izay lasa empira. Nofeheziny ny fifamoivizana an-drano, ny fitarihan-drano, ny fambolena, ny fanangonan-ketra ary ny fanorenana tempoly maro sy trano lehibe maro hafa koa. Mpitari-tafika sy mpandraharaha fanjakana nahita fahombiazana i Hamoraby.
Namporisika ny hisian’ ny fanangonana lalàna izay nifehezany ny fiainan’ ny mponina tany Babilôna i Hamoraby. Tsy inona izany fa ilay Fehezan-dalànan' i Hamoraby, izay nisy akony tamin’ ny fiainan’ ny vahoaka tany amin’ ny tany Atsinanana tamin’ ny Andro Taloha. Izany fahezan-dalàna izany dia voasoratra amin’ ny tsangambato manana haavo mirefy roa metatra. Ny tapany ambony amin’ ilay tsangambatodia dia miresaka ny nanehoan’ ny andriamanitra-masoandro Samasa (Shamash) tamin’ i Hamoraby ilay faribolana maneho an-kisary ny fahefana mpanao lalàna. Ny eo ambanin’ io dia voasokitra ny fanangonana ireo fehin-tenin’ ny mpanjaka izay natao ho fakana ohatra, dia ny Fehezan-dalàn’i Hamoraby.
I Samsoilona (Samsu-iluna) no zanany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Hamoraby&oldid=1012440"
Dernière modification le 21 Jiona 2021, à 09:32
Voaova farany tamin'ny 21 Jiona 2021 amin'ny 09:32 ity pejy ity.